SALES & MARKETING MANAGEMENT TRAINGING
Thread: SALES & MARKETING MANAGEMENT TRAINGING
Rep Power0SALES & MARKETING MANAGEMENT TRAINGING
ယခုဖေါ်ပြချက်များသည် device မှ သင်ရိုးစာအုပ်ကိုဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်
အခြေနေ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် လေ့လာရန်ခက်ခဲသူများကိုရည်ရွယ်
ပြီးပြန်လည်မျှဝေခြင်းသာဖြစ်ပါသည် PLANNING ကိုတော့ခဏချန်ထားပါတယ်
Reply With Quote The Following2Users Say Thank You to aprilangel For This Useful Post:
NayNyo, William Paul 06-25-2009 10:28 PM
Rep Power0ပြန်စာ -> SALES & MARKETING MANAGEMENT TRAINGING
[size=14pt]ဈေးကွက်နှင့် အရောင်းမန်နေဂျာကောင်းတစ်ယောက်၏ အရည်အချင်းများ[/size]
၁၈.အရည်အချင်းကိုသတ်မှတ်ထိန်းသိမ်းနိုင်သူ (တစ်ဦးချင်းအရည်ချင်းကို စာရင်းပြုစု)
ရှင်းလင်းချက်. . . . အထက်ပါအချက်များမှ ၅ ချက်အထက်ပြည့်စုံမှသာ မန်နေဂျာကောင်းပီသပါမည်
မရှိမဖြစ်အချက်မှာ နံပါတ် ၁၄ ဖြစ်ပါသည် အခြားဘယ်အချက်တွေက အရေးကြီးတယ်ထင်ပါသလဲ?
Reply With Quote The Following4Users Say Thank You to aprilangel For This Useful Post:
hlwamkoko, NayNyo, William Paul, နေမင်းသွေး 06-25-2009 10:44 PM
[size=16pt]Management By Objective (MBO) ရည်မှန်းချက်ချမှတ် စီမံခန့်ခွဲခြင်း[/size]
[size=12pt]1.Set Goal (For all Sales &amp; Marketing Person) ရည်မှန်းချက်သတ်မှတ်ခြင်း[/size]
a. Accurate &amp; Safely
c.Accurate Target &amp; Limitation
2.Devolope Action Plan (လုပ်ငန်းစီမံချက်ချမှတ်ခြင်း)[/size]
[size=12pt]3.Review Progress(လက်ရှိအခြေနေကို သုံးသပ်ခြင်း)[/size]
[size=12pt]4.Appraise Overall Performance(စွမ်းဆောင်ချက်အားလုံးကို အကဲဖြတ်ခြင်း)[/size]
a.Comparison For Annual
b.Next Year Goal
hlwamkoko, William Paul 06-26-2009 08:23 PM
၁.ရည်မှန်းချက်ချမှတ် စီမံခန့်ခွဲခြင်း ဆိုတာက
ှုဥပမာ promotion ပေးမယ်ဆိုပါတော့
promotion မပေးခင် ပစ္စည်း၁၀၀၀ ရောင်းရတယ်ဆိုပါတော့
pr၀motion ပေးတော့ ၂၅၀၀ ရောင်းရမယ်
ဒီနေရာမှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ promotion ပေးမယ်ဆိုတာပါထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်
promotion ကာလပြီးရင်တော့ ၁၅၀၀ မှ ၁၈၀၀ ကျန်ရမယ် အဲလိုသတ်မှတ်တာမျိုးကိုဆိုလိုတာပါ
a. Accurate &amp; Safely တိကျရမယ် ထိခိုက်နိုင်မယ့်ဟာကို အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ရမယ်
b.Practical Implementation လက်တွေ့အကောင်ထည်ဖေါ်ရမယ်
c.Accurate Target &amp; Limitation တိကျတဲ့ဦးတည်ချက်ထားရမယ် ကန့်သတ်ချက်ထားရမယ်
d.Delegation Power လုပ်ငန်းခွဲဝေပေးရမယ် (မန်နေဂျာတစ်ဦးတည်းလုပ်တာမျိုးကိုရှောင်ရပါမယ်)
e.Dynamic Management (တက်ကြွစွာဦးဆောင်နိုင်ရမယ်)
၂.လုပ်ငန်းစီမံချက်ချမှတ်ခြင်း နဲ့ပက်သက်လို့ တစ်ဦးချင်းနဲ့ အဖွဲ့လိုက်ဆိုပြီးခွဲထားပါတယ်
၃.လက်ရှိအခြေနေကို သုံးသပ်ခြင်း ဆိုတာကတော့ လက်ရှိအခြေနေကို ၃ လ ၆လ ၉ လသတ်မှတ်သုံးသပ်တာမျိုးပါ
၄.စွမ်းဆောင်ချက်အားလုံးကို အကဲဖြတ်ခြင်း မှာတော့ အချိန်ရယ်
ဘာကြောင့်တိုးလဲ ဘာကြောင့်လျောလဲ လေ့လာရပါမယ် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရောင်းရငွေ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရပါမယ်
နှိုင်းယှဉ်တဲ့နေရာမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က မေလဆိုရင် ဒီနှစ်မေလ တူညီတဲ့လနဲ့ပဲ
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အချိန် ရာသီဥတု အကုန်နဲ့သက်ဆိုင်နေလိုပါပဲ တူညီတဲ့လချင်းပေါ်မှာသုံးသပ်ရပါမယ် Reply With Quote The Following4Users Say Thank You to aprilangel For This Useful Post:
hlwamkoko, NayNyo, William Paul, နေမင်းသွေး 06-26-2009 08:36 PM
လာပါပြီ MBOရဲ့ အားသာချက်
a. To Penetrate All Sales &amp; Marketing Staff Work Force
b. To improve Every Sector Performance
c. To Motivate Hard Working
d. To Co-ordinate &amp; Co-operate
a.Often Change Objective,Delay Action Plan
b.Non-Effective Because Of Enterpreneurs ship
c.Double Job For Paper Work, Not Satified
Reply With Quote 09-07-2012 09:42 PM
Min Thet Naung
Rep Power0ှုဥပမာ promotion ပေးမယ်ဆိုပါတော့
ဒီနေရာမှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ promotion ပေးမယ်ဆိုတာပါထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်
ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့ ဈေးကွက်ထဲမှာတော့ သိပ်ပီး မမျှော်လင့်ရဲဘူးဗျ...
(promotion ကာလအတွင်းမှာ ဈေးလျှော့ရောင်းတော့ ပစ္စည်းများများရောင်းရလို့ အမြတ်ပိုကျန်တယ်
promotionပီးတော့ မူလပေါက်ဈေးထက် ဈေးပိုတင်ဦးမှာ...)...
Last edited by Min Thet Naung; 09-07-2012 at 09:49 PM.
Reply With Quote 12-18-2012 01:35 PM
Rep Power0planning ကို စောင့်နေပါတယ်အကို ဆက်ရေးပေးပါအုံး
By cy in forum စီမံခန့် ခွဲမှုနည်းပညာ Replies: 5
Last Post: 07-27-2011, 02:24 PM
By mcjoker in forum သင်တန်း
Last Post: 03-02-2010, 09:28 PM
By Luminox in forum အခြား စာအုပ်များ
Last Post: 12-27-2009, 10:39 AM
နေရာရွှေပြီး။: SALES & MARKETING MANAGEMENT TRAINGING
By yeakharr in forum ထွေရာလေးပါးပြောကြမယ်
Last Post: 06-26-2009, 04:48 PM